Training – SoftGuide
What is Windows OS ?
ကွန်ပျူတာကို စတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို ကိုင်တွယ်ထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့ Operating System Program တစ်ခုကို တတ်ကျွမ်းထားရပါမယ်။ ဒီလို OS program နဲ့ ကွန်ပျူတာကို ကိုင်တွယ် နိုင်ပြီဆိုမှသာ အခြားအသုံးချ ကွန်ပျူတာဆော့(ဖ်)ဝဲလ် တွေကို လေ့လာ ဆည်းပူးရန် အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။Soft Guide ရဲ့ Office Application Course ကို တတ်ကျွမ်းမယ်ဆိုရင် ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်များစွာမှ မည်သည့် ကဏ္ဍကို စိတ်ဝင်စားသလဲ၊ ဘယ်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ၊ ဘာတွေကို ဆက်လက် လေ့လာသင့်လဲ၊ စတာတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်လာနိုင်ရုံမျှမက စာရင်းဇယားများကို Spread Sheet တွင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ ပုံပြဂရပ်များ ဆွဲသားခြင်း၊ စာမျက်နှာ ပုံစံများစွာကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ Presentation များကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ် လာနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ကုမ္ဗဏီ လုပ်ငန်းများတွင် အဓိက အရေးပါသောComputer Operator တစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးနိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး – 30,000 ကျပ်
အချိန်ကာလ – ၂ လ
Adobe Photoshop C.S
D.T.P. ဆိုတာ Desktop Publishing ကွန်ပျူတာနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ေ၀ ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ SGရဲ့D.T.P. Course ကို တတ်ရင် စာစီစာရိုက်လုပ်နိုင်ရုံမျှမက အခါအားလျှော်စွာလိုအပ်လာသော Logo Design များ Greeting Card များ၊ ထူးခြားသော Layout Style များ၊ ကုမ္ဗဏီအစည်းအဝေးများ၊ ပြပွဲများအတွက် မရှိမဖြစ် On Screen Layout များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Adobe Illustrator C.S
Graphic Design ဟာနယ်ပယ်များစွာမှာ အဓိကကျပြီး မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို အများစိတ်ဝင်စား အောင် လှပပြီးဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့ ပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာအောင် လုပ်မယ်၊ စက်ပစ်္စည်းတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီပစ်္စည်းကို ဘယ်လိုသုံးစွဲရမယ် ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကို Customer သိအောင် Outline Drawing နှင့်ပြသတဲ့User Manual တွေထုတ်မယ်၊ မိမိအိမ်ခန်းမှ တဖဝါးမှ မခွာဘဲParis မျှော်စင်ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်၊ Internet WebPage Designer များ၊ Programmer များအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Background များနှင့် Button များ ဖန်တီးမယ်၊ Multimedia Interactive CD – ROM တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ လှပသော Scence များ ဖန်တီးမယ်၊ …. စသည်ဖြင့် ပြော၍ပင် မကုန်နိုင်သော ဖန်တီးမှုများနှင့် စိတ်ကို အပန်းဖြေစေမည့်အပြင်၊ Webpage Design, Special Effectလုပ်လိုသူများအတွက် အခြေခံ ကောင်းများ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး – 45,000 ကျပ်
Internet and E-mail Course
Knowledge of various Web Browser
Searching with various Search Engine
Sending E-mail with Attachment Files
Chatting with world wide friends
Files Dowloading and Uploading
Using time above 12 hrs
သင်တန်းကြေး – 7,000 ကျပ်
အချိန်ကာလ – ၂ ပတ်
Adobe Photoshop C.S 2
သင်တန်းကြေး – 25,000 ကျပ်
အချိန်ကာလ – ၁ လ
သင်တန်းကြေး – 50,000 ကျပ်
Engineering Drawing (Level I)
Engineering Drawing (Level II)
Computerized Accounting (ACCPAC)
Computerized Accounting (Peachtree)
သင်တန်းကြေး – 35,000 ကျပ်
သင်တန်းကြေး – 40,000 ကျပ်
အချိန်ကာလ – ၃ လ
Using E-mail, Internet
မည္သည့္ေနရာက စာေတြကိုမဆို ကူးယူေပးႏုိင္တဲ့ Universal Copy (Android)
Soft Guide provide Hosting & Domain cheaply. And then you can buy VPS. If you want to work as Reseller from Soft Guide, we sell Reseller plan for domain, hosting and VPS. Quick connect to
No.63/65, 8th floor, 19th street, Lathar Township, Yangon
© Copyright 2020 Softguide Co.ltd